Ihe nkiri vidio ohuru 'na-ezighi ezi' na-egosi Giant Log Mowing Down Hikers
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Ihe nkiri vidio ohuru 'na-ezighi ezi' na-egosi Giant Log Mowing Down Hikers
by Timothy Rawles January 9, 2021 4,183 echiche
Njọhie: Ntọala weputara ihe nlere nke mbu n’izu gara aga. Ugbu a aha Njohie na-ezighi ezi ihe nkiri ahụ bụ Matthew Modine, Charlotte Vega, na Bill Sage; a na-ahazi ịhapụ na ihe nkiri (na VOD anaghị egbochi) maka otu abalị naanị na Jenụwarị 26.
Obere vidiyo bụ naanị IGN ma gosipụta ntakịrị ntakịrị ihe odide ndị eto eto ndị furu efu n'ọhịa ma ụyọkọ ugwu nta ndị na-eri anụ na-eso ha. Onye na-emepụta usoro Alan B. McElroy laghachiri edegharị ederede a mgbe Mike P. Nelson (Ezinaụlọ) na-eduzi.
Mpempe akwụkwọ dị n'okpuru na-ewepụta akụkọ na-egosi otu ndị enyi na-agbadata site n'okporo ụzọ Appalachian. N’ebe ọ bụla, a tọhapụrụ nnukwu ogwe osisi wee malite ịtụgharị n’azụ ha dị ka steamroller ochie. Ka ha na-agbanahụ ọnyà ahụ, otu nwa okorobịa (Vardaan Arora) kwadoro na osisi dị ka ogwe osisi na-enweghị njikwa na-eche ya ihu, na-atụ aro ọnwụ ọbara ya.
Ntinye aha, nke malitere na 2003, nwere (ruo ugbu a) usoro ise, nke ọ bụla nwere ọkwa nkatọ dịgasị iche. Otutu, ndi Fans na-eguzosi ike n'ihe nye ndi izizi Eliza Dushku na Desmond Harrington. Oge Ikpeazụ bụ ntinye ikpeazụ n'ime usoro azụ na 2014. Reboot bidoro ịse ihe na Septemba 2019 tupu ọrịa na-efe efe.
Dị ka ọnyà slashers na-aga, na Njohie na-ezighi ezi aha malitere ike. Agbanyeghi na esitere na akuko ndi ozo nweta echiche a, ndi mmadu nwere obi uto banyere igbu na ogo nke mmeputa. Na fim ndị ọzọ, ndị na-eri anụ, nke ọ bụla nwere ụdị igbu onwe ya ghọrọ nnukwu anụ ọhịa nkiri a na-echefu echefu nke mere ka ndụ aha.
Nke a kachasị ọhụrụ Turn na-abịa mgbe ndị na-atụ ụjọ na-akpọ nkụ maka ihe nkiri a na-egbu maramara mgbe ha nwụsịrị ọtụtụ ihe nkiri egwu onwe ha mgbe a napụrụ iche n'ụlọ. Emepụtara ụlọ German bụ Constantin Films Njohie na-ezighi ezi na Saban na-eburu ikike nkesa North America na njedebe nke afọ gara aga.
Njohie na-ezighi ezi ga-ahapụ maka otu abalị na ihe nkiri, na VOD, na Jenụwarị 26.